Shacabka Oo U Dheg Taagaya Natijada Kulanka Sabtida Ee Saddexda Murashax Iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranka – | Berberatoday.com
Shacabka Oo U Dheg Taagaya Natijada Kulanka Sabtida Ee Saddexda Murashax Iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranka –
Hargeysa(Berberatoday.com)-Waxa ay shacabka Somaliland si weyn ugu dheg taagayaan kulanka la filayo inay Sabtida isugu yimaadaan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku, kaas oo muhiim u ah arrimaha qabsoomida doorashada madaxtooyada.
Kulanka oo ay ahayd inuu qabsoomo khamiista saadambe, ayaa Sabtida ugu dhacay guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo la filayo inuu khamiista dalka soo gaadho. Inkastoo aanu jirin war rasmi ah oo ku saabsan ujeedada kulankaas, haddana guddiga doorashada ayaa la saadaalinayaa inay madaxda tartamaysa u soo bandhigi doonaan natiijada uga soo baxday socdaal qiimayn ah oo ay ku tageen gobalada dalka, kaas oo ay ku soo ogaanayeen sida dadkii isdiiwaangeliyay goobahihii ay deganaayeen loogu gayn karo kaadhadhka cod bixinta doorashada.
Inkastoo aanay guddigu wax war ah ka soo saarin kormeerkoodaas, haddana dad badan ayaa saadaalinaya inay soo heleen xog cad oo tilmaamaysa in dad badan oo ka mid ah dadkii isdiiwaangeliyay ay abaartu ka hayaamisay deegaamadii laga diiwaangeliyay ee ay sharciyan tahay inay ka codeeyaan, iyadoo la ogyahay abaarta isa soo taraysa iyadoo jiilaalkii hadda lagu jiro maalmo kooban.
Saddexda guddoomiye xisbi qaran, ayaa markaas la saadaalinayaa inay go’aan ka qaadan doonaan in doorashadu qabsoomi karto iyo inaanay qabsoomi karin, waxaana suurtogal ah inay adkaato sida ay mawqif midaysan u qaataan, marka laga shidaal qaato kala fogaanshaha mawqifyadooda siyaasadeed iyo tartanka adag ee ka dhexeeya.
Haddii la isla garto in doorashadu dib uga dhacdo dabayaaqadda bisha March, waxa iyana adkaan doonta inay saddexdan murashax isku raacaan wakhtiga la kordhin karo, inkastoo ay golaha guurtidu awood distooriyan ah leeyihiin haddii la arko inaanay doorashadu qabsoomi karin.
Si kastaba ha ahaate, kulanka Sabtida, ayaa muhiim u ah doorashada madaxtooyada, waxaanu kulankaasi kala cadayn doonaa wax badan oo hadda madmadow ku jira, waana sababta ay shacabku ugu dheg taagayaan kulankaas iyo natiijada ka soo bixi doonta.